भारतमा ज्यान गु’माउनेको नया रेकर्ड , एकैदिन यति धेरैले गु’माए ज्यान ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियभारतमा ज्यान गु’माउनेको नया रेकर्ड , एकैदिन यति धेरैले गु’माए ज्यान !
भारतमा ज्यान गु’माउनेको नया रेकर्ड , एकैदिन यति धेरैले गु’माए ज्यान !
एजेन्सी । भारतका अस्पतालहरुले अक्सिजनको अभावकै कारण आफ्ना वि’मारीहरु म’रिरहेको बताएका छन् । किनभने कोरोना संक्रमित र मृतकको आँकडाले दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् ।भारतमा पछिल्लो तीन दिनको बीचमा करिव १० लाख मानिस संक्रमित भएका छन् ।
शनिबार २४ घण्टाको अवधिमा ३ लाख ३६ हजार ७८६ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् ।दिल्लीको जयपुर गोल्डेन अस्पतालमा शनिबार राती अक्सिजन न’पाएर २० जना संक्रमितको नि’धन भएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ । भारत सरकारले भने रेल सेवा र भा’रतीय वायु सेनालाई आवश्यक उपकरण आपूर्तिका लागि तै’नाथ राखिएको बताएको छ ।
शनिबार २४ घण्टाको अवधिमा भारतभर २६ सय २४ जनाको मृ’त्यु भएको छ । शुक्रबार यो संख्या २२ सय ६३ थियो । विश्व स्वास्थ्य सं’गठन (डब्लूएचओ)ले भारतको अहिलेको स्थितिलाई ‘म’हाविनाशकारी अवस्था’को रुपमा चित्रण गरी कोरोनाले कतिसम्म क्षति गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको बताएको छ ।
सन् २०२१ को सुरुआतमा भारतले कोरोनालाई प’रास्त गरेको ठा’नेको थियो । फेब्रुअरीको मध्यतिर सवा अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा ११ हजार नयाँ संक्रमित देखिएका थिए । भारतले खोप उत्पादन गरी निर्यातसमेत गर्न थालेको थियो । मार्चमा त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले को’रोनाबिरुद्धको ल’डाईं अ’न्त्यतिर पुगेको बताएका थिए ।
तर त्यतिबेलै देखि नयाँ कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका थिए । नयाँ भे’रिएन्टको प्रवेश भइसकेपछि पनि त्यहाँ सार्वजनिक स’मारोह, कु’म्भमेला लगायतका ग’तिविधि रोकिएन । यही महिनाको सुरुआतमा ह’रिद्वारमा आयोजित कु’म्भमेलामा लाखौं तीर्थयात्री सहभागी थिए ।
राजधानी दिल्लीका अस्पतालहरुले आफ्नो सा’मर्थ्यको अ’न्तिम अवस्थामा रहेको चे’तावनी दिएका छन् । हो’ली फ्या’मिली अस्पतालले आ’ईसीयूसहित आफ्ना सबै बे’डहरु भ’रिभराउ रहेको जनाएको छ ।‘लगभग सबै अस्पताल अ’न्तिम स्थि’तिमा छन् ।अक्सिजन पाइएन भने हामीले कुनै पनि रो’गका वि’रामीको उपचार गर्नै सक्दैनौं ।’
दिल्लीका एक चिकित्सकले बीबीसीसँग भने, ‘अक्सिजन नपाएको अवस्थामा १ मिनेटभित्र ती बि’रामीको मृ’त्यु हुन्छ । भेन्टिलेटरमा रहेका बि’रामीलाई उच्च प्र’वाहको अक्सिजन जरुरी हुन्छ । उनीहरुले त्यो सुविधा पाएनन् भने अधिकांशले मृ’त्युवरण गर्न बा’ध्य हुनेछन् ।’